Imidlalo yeOlimpiki iTokyo 2020: ungazijonga njani SIMAHLA kwaye UPHILE | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 13/07/2021 11:27 | ngokubanzi, Ukusasaza
Ezona bekufanele ukuba zi IOlimpiki yaseTokyo ngo-2020 yaba, ngenxa ye- I-COVID19, kwii-Olimpiki zaseTokyo zowe-2021. Imbali ihlehlisiwe unyaka, kodwa umnqweno nomnqweno weembaleki ezigqwesileyo ehlabathini ukufumana imedali yegolide ekudala ilindelwe ayikanciphisi iota.
Fumanisa ukuba ungayibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 isimahla, zombini kwi-Intanethi nakumabonwakude, ngeyona ndlela intle. Zilungiselele le Olimpiki eqala kungekudala emva kwe-Euro 2020 kwaye enokuthi izise uvuyo olukhulu kubathandi beqonga lezemidlalo apho ezethu ziya kuzama ithamsanqa.
Zama inyanga yasimahla: Ungaphoswa kukuvulwa kwemidlalo ye-Olimpiki kwaye ubhalise kwi-DAZN ucofa apha. Uyakwazi ukubona yonke imidlalo yeOlimpiki kunye neminye imidlalo ekhethekileyo (F1, basketball, ibhola ekhatywayo ...)
1 Imihla kunye nokuqala kweMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020:
2 Uyibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla kunye ne-Intanethi
3 Uyibukela njani iOlimpiki kwiVodafone, Movistar kunye neorenji
4 Iindawo zeMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020
5 Yonke imidlalo evela kwiiOlimpiki zaseTokyo zango-2020
6 Indima yeSpain kwimidlalo yeOlimpiki
Imihla kunye nokuqala kweMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020:
Imidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yayicwangciselwe ukuba ibekho phakathi kukaJulayi 24 no-Agasti 9. Nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo ukuba i-Eurocup nayo kufuneka ihlehlisiwe kwaye i-coronavirus inokuhamba ngokukhululekileyo, bekungekho enye indlela ngaphandle kokubeka imihla emitsha.
Ke, iKomiti yeOlimpiki yeHlabathi (i-IOC) yaqala yagqiba ekubeni ligcine igama I-Tokyo 2020 yezi Olimpiki, kunye nokuseka ikhalenda entsha esiza kukucacisela yona apha ngezantsi.
Ngale ndlela, Umhla wokuqala ngokusesikweni weMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 iya kuba ngoJulayi 23, 2021, ngelixa umsitho wokuvala uza kuba ngo-Agasti 8, 2021. Njengoko isithethe sisitsho, umsitho wokuvula wale midlalo ye-Olimpiki yaseTokyo ka-2020 uza kubanjelwa kwibala lezemidlalo lase-Tokyo kwangolo suku lunye ngoJulayi 23, 2021 kwaye ungabona bukhoma ukusuka apha.
Uyazi ukuba lo mboniso wezemidlalo uza kwenzeka nini, Isiganeko esenzeka kuphela rhoqo kwiminyaka emine kwaye sidibanisa iimbaleki ezilungileyo ezivela kwihlabathi liphela. Ixesha elifanelekileyo lokwenza ikhalenda enomdla yemibhiyozo.
Ngendlela efanayo neMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo ka-2020 efumene ikhalenda ehlengahlengisiweyo, ngokuchanekileyo kuya kwenzeka njalo Imidlalo yaseTokyo 2020 yeParalympic, eya kuqhubeka phakathi kuka-Agasti 24 noSeptemba 5 walo nyaka 2021. Siqinisekile ukuba awuyi kufuna ukuphulukana nabo, amaqhawe okwenyani alwa nobunzima.
Uyibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla kunye ne-Intanethi
Sinezinye iindlela ezininzi zokubona iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo eyona inomdla kukukhetha inyanga yetyala ethi i-DAZN ibonelele kubo bonke ababhalisile. Njengoko ufunda nje, I-DAZN ibonelela ngolingo lweentsuku ezingama-30 ukusuka kwiqonga layo ngaphandle kokuhlawula nantoni na, ngaphandle kwayo nayiphi na indlela yokuzibophelela okanye isohlwayo, ngenxa yoku kufuneka ubhalise kwi-DAZN ngesiqhelo.
Ukuba i-DAZN iphela ikukholisa, ungakhetha inkonzo yonyaka eza kukunika ezinye iinyanga ezimbini (zizonke ezintathu) simahla, ezi zizibonelelo:
Intlawulo ngenyanga: € 9,99 / ngenyanga
Intlawulo Ngonyaka: € 99,99 / ngenyanga
Kwakhona, ungalibali ukuba uya kuba nakho ukonwabela umxholo okhethekileyo njenge-English Premier League okanye i-Basketball Euroleague efakwe kubhaliso lwakho lwe-DAZN. Le yeyona ndlela isemthethweni kwaye ilula yokonwabela iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 simahla, konke ngaphandle kokulibala ukuba i-DAZN inesicelo samaqonga aphambili eSmart TV ka-Samsung, LG kunye no-Sony, kunye neenguqulelo zabo ze-Android TV kunye I-Apple TV, ukuze ukonwabele i-DAZN kokubini kwi-PC yakho nakwiselfowuni okanye kumabonwakude.
Ngokufanayo, I-RTVE (iRadiyo Televisión Española) izakusasaza umxholo othile kwiMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo ngo-2020 kumoya osimahla kumajelo ohlukeneyo kamabonakude, ngakumbi "i-TDP" okanye iTelepeporte. Uyakwazi ukubonisana nomxholo kwimfuno kwiwebhusayithi yayo kangangeveki emva kokuba usasaziwe. Ewe kuya kufuneka unike ingqalelo kwikhalenda yomxholo osasazwayo. Ngokufanayo, i-RTVE izakusasaza iMidlalo yeTokyo 2020 yeParalympic.
Zama inyanga yasimahla I-DAZN kwaye ungaphuthelwa nantoni na kwi-Olimpiki yaseTokyo ka-2021
Uyibukela njani iOlimpiki kwiVodafone, Movistar kunye neorenji
Abona banikezeli benkonzo ye-intanethi kunye ne-VOD eSpain baya kusasaza umxholo onxulumene neeOlimpiki zaseTokyo zango-2020 kumajelo abo:
Orenji: I-Eurosport 1 kunye ne-Eurosport 2 kwi-dial 100 kunye ne-101 kunye ne-Orange TV iyonke iphakheji.
Imovistar: I-Eurosport 1 kunye ne-Eurosport 2 kwi-dial 61 kunye ne-62 ngayo nayiphi na imali yeMovistar Fusion.
IVodafone: I-Eurosport 1 iya kufumaneka kunye nayiphi na iirhafu zayo ezibandakanya umabonwakude. Ewe uya kusilela kwisiteshi se-Eurosport 2 esiya kubiza malunga ne- $ 5 ngaphezulu ngenyanga.
Njengoko ubonile, yonke i-intanethi kunye nabanikezeli bethelevishini abasebenza eSpain basebenzisa umxholo we-Eurosport ukubonelela nge I-Olimpiki yaseTokyo 2020. Ukuba kwelinye icala ufuna ukuqesha i-Eurosport, eya kuthi ikhuphe lonke uqeqesho ngaphandle kokukhetha, unokwenza oku kulandelayo:
Intlawulo yenyanga: 6,99 €
Intlawulo yonyaka: 39,99 €
Iindawo zeMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020
Idolophu enkulu yaseJapan izakubeka yonke ikomkhulu layo kwiindawo ezintathu ukuze ibonelele ngophuhliso olusebenzayo Imidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020:
ITokyo Bay: IZiko leMidlalo yeOlimpiki, iAriake Coliseum, iAriake Arena.
Indawo yeLifa leMveli: Ibala lezemidlalo laseTokyo, iNippon Budokan kunye neGadi ye-Imperial Palace.
Indawo yenqila: Intsimi yeAska, iSaitama Super Arena kunye neYokohama Stadium.
IJapan, ngokwenxalenye yayo, iphinde yabhengeza iMo yeNgxakeko ngenxa yokunyuka kwe-COVID-19, ke ngoko akuyi kubakho luluntu kwizitendi, nokuba zezasekhaya nezangaphandle. KUNYEOku kuyakuphazamisa umsitho wokuvula weMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020, kunye nokuvala.
Lixesha elifanelekileyo lokukhumbula ukuba kwiMidlalo yeOlimpiki yokugqibela eRio de Janeiro 2016 igqiza laseSpain Yenziwe zizonke iimbaleki ezingama-306 ezithathe inxaxheba kwimidlalo engama-25 eyahlukeneyo. Kule meko, iSpain ibilishumi elinesine kuluhlu lweembasa, ngaloo ndlela ifumana iimbasa zegolide ezisi-14, iimedali zesilivere ezi-7 kunye neembasa zobhedu ezi-4. Oku, ngakumbi, ibikukuthabatha inxaxheba kwesibini eSpain kwimidlalo yeOlimpiki ukusukela ngeBarcelona 6. Ke ngoko, xa sijonga ukuba ngoku sinabathabathi-nxaxheba abaninzi, kulindeleke ukuba sibethe irekhodi lethu.
Siyathemba ukuba ulufumene olu luhlu lunomdla lwezinto onokukhetha kuzo apho ungayibona khona iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020, ke awuzukuphosa iota yento yonke eyenzekayo kumnyhadala wezemidlalo olindelwe ngabathandi bezemidlalo, ezi Olimpiki zithembisa ukuba zinomdla kakhulu akhawunti imeko ekhethekileyo eye yenzeka ngexesha lobhubhane, ngoku lixesha lokonwabela.
Yonke imidlalo evela kwiiOlimpiki zaseTokyo zango-2020
Sinezinto ezahlukeneyo, uyazi ukuba iKomiti yeOlimpiki yeHlabathi ihlala ihluka kwezinye zeendlela apho ithatha inxaxheba, nangona kunjalo, ezakudala zigcinwa:
Ibhola yeBhasikithi 3 × 3
Freestyle BMX ngebhayisikile
Ukuhamba ngebhayisikile BMX racing
Landa umkhondo webhayisikile
Ukuhamba ngebhayisikile endleleni
Imithambo yomzimba enesingqi
Ukuqubha emanzini avulekileyo
Ukuhamba ngephenyane kweSlalom
Ukuhamba ngeenqanawa entwasahlobo
Ibhola yevoli yaselwandle
Ngokucacileyo, phakathi kwezi nkalo siza kufumana ezinye zezona ndlela zaziwayo njengepali vault okanye umgama weemitha ezili-100.
Indima yeSpain kwimidlalo yeOlimpiki
IKomiti yeOlimpiki yaseSpain (ngegama layo elibizwa ngokuba yi-COE) Iya kuba negalelo kwiMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo engekho ngaphantsi kweembaleki ezingama-321 kumacandelo angama-29 ahlukeneyo. Kulo nyaka abaphathi bendwe baseSpain baya kuba ngumkhweli wephenyane uSaul Craviotto kunye nendadi uMireia Belmonte. Kwezi mbaleki, iSpain izakufaka isandla kumadoda ali-184 kunye nabasetyhini abayi-137 abaza kulwela ukuphumelela imbasa yegolide, njengoko ibingenakuba njalo.
ISpain kufuneka ibe phakathi kweembasa ezili-14 ukuya kwezingama-24, ngelixa ubuninzi bokubetha ziimedali ezingama-22 ezafunyanwa kwiMidlalo yeOlimpiki yaseBarcelona ngo-1992. Nangona ukufezekisa igolide kubiza kakhulu, kuya kufuneka sigade iKarate, iTriathlon kunye Ukuhamba ngeenqanawa.
IKarati: USandra Sánchez, ummeli wabasetyhini waseSpain, ube yintshatsheli yehlabathi ngo-2018 nango-2019, ke le mpumelelo imbeka njengoyintandokazi kwimedali yegolide. Kukwenzeka okufanayo nakuDamián Quintero, iMalaga ikunombolo-1 kuluhlu oluphume phambili nakwimbaleki kwihlabathi liphela, ke imbasa kufuneka iqinisekiswe.
Ukuhamba ngeenqanawa: USaul Craviotto ukhangela imbasa yakhe yesihlanu ukuze atshatise uDavid Cal, phakathi kwabanye uzakulwela uzuko noCristian Toro owayeyimbasa yegolide eRio 2016.
Umnyazi: Ayicacanga into yokuba iqela lamadoda ebhola yomnyazi laseSpain lilungu elicacileyo lembasa yegolide ecaleni kweMelika, kodwa asilibali iqela labasetyhini beSpanish, iimbaleki zaseYurophu kwi2019 kunye neyesithathu kwihlabathi ngo-2018. ibekwe njengelinye lawona maqela aphambili ebhola yomnyazi kwimbali.
Iqela lebhola ekhatywayo lamadoda: Nangona kuphela imihla yakhe yegolide ukusuka kwi-1992 kwaye akazange athathe inxaxheba kwiRio 2016, iqela elenziwe ngabadlali bebhola abaziwayo abanjengoPedri okanye uMarco Asensio bazokulwa ukuzisa igolide eSpain.
Le yeminye yemidlalo apho iSpain inethemba lokufumana igama lembasa yesinyithi kwaye ke kuya kufuneka ulungele i-ajenda yakho ukuze ungaphoswa luvo lwempumelelo yethu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Bukela iMidlalo yeOlimpiki yowama-2021 mahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyibukela njani iMidlalo yeOlimpiki yaseTokyo 2020 yasimahla kwaye uphile